Iinwele zeNkosana ezivela kwi-1978 ukuya kwi-2013 | Izidalwa ezikwi-Intanethi
NgoLwesine odlulileyo, iNkosana, a Igcisa elinetalente ekhethekileyo eyaziwa ngabantu abaninzi ngelizwi layo elahlukileyo kodwa ukuba kwikatala wayenazo nje izipho eziphakamileyo. Imvumi, ikatala kunye nomdanisi owayenomdla omkhulu kumbala othile omfusa weengoma zakhe ezifana nomfuziselo Imvula ePuphu.
Siza kwenza i irhafu encinci ngezo ndidi zeenwele eziye zatshintsha ebomini bakhe bonke echaza amandla akhe okudala kunye neetalente ezinkulu ukusishiya iingoma ezibonise loo minyaka engama-80 nama-90. UDavid Bowie usishiyile, omnye umculi omkhulu ohlukeneyo kunye no-chameleonic.
NjengoBuyie, iNkosana yayinjalo inkosi yokuzihlaziya kunye nokuguqula iminyaka ngaphandle kokuphulukana nobuntu bayo. Utshintshe igama lakhe ubuncinci amaxesha asixhenxe kwaye udlale iintlobo ezahlukeneyo ebomini bakhe.
Namhlanje ndiyayazi loo nto INkosana inokukhupha icwecwe elitsha rhoqo ngonyaka kwikhulu elizayo. Ubuchule babo bokuyila kunye nobuchule babo bemvelo kukuba uphawu lwabo luya kuqhubeka nathi amashumi eminyaka, kuba uninzi lwabazobi, bahlala bethandwa xa sisazi ukuba asisayi kuba nawo loo mthombo wenkuthazo wokusikhokelela ezinye iithowuni kunye nezinye iingoma.
Kwaye asithethanga kuphela malunga neempawu zakhe emculweni, kodwa wayekwangumdlali weqonga, umlawuli kunye nomvelisi. Inqaku elinomdla elinento yokwenza nesitayile sakhe, enye yeempawu zakhe ezintle kunye nalo mfusa wayesondele kuye, yile Iinwele zitshintshile amaxesha angama-36 ukusuka ku-1978 ukuya ku-2013.
Njengoko ubona kwimifanekiso eyenziwe nguGary Card, iNkosana ihlala ihleli babenemfashini kunye nesimbo njengento ebaluleke kakhulu ebomini babo. Kwaye yayingekuko ukuba wayelandela imikhwa, kodwa wayecinga ngazo okanye esiya kwezinye iindawo ezahlukeneyo, into eyamchaza njengegcisa.
Un umculi kunye nomculi oza kuqhubeka nokukhuthaza amakhulu kumashumi eminyaka ezayo kwaye kuyo Imvula ePuphu singayifumana le nostalgia yale mihla ngaphambi kokungabikho kwakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imbeko kwiNkosana, igcisa elikhulu elinetalente eliguqule iinwele zalo izihlandlo ezingama-36 ukusuka ngo-1978 ukuya kowe-2013
Ezona nqanawa ze-Star Wars zibalaseleyo ziboniswe ngokweenkcukacha ezinkulu